ओलीको पालामा देश ऋणमय भयो, अहिले अनुदानमय: प्रवक्ता महत
सामाजिक सञ्चार सोमबार, वैशाख २६, २०७९
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशसरण महतले केपी शर्मा ओलीको पालामा देश ऋणमय बनेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता डा. महतले ओलीको पालामा ऋणमय बनेको देश अब विस्तारै अनुदानमय बन्न लागेको बताए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २६, २०७९, १४:४६:००